Azonao atoro ahy ve ny fomba nahatonga anao hitondra fiara amin'ny lisitry Amazon anao?
Raha mbola manontany tena ianao ary te hahafantatra ny fomba fitaterana ny fifamoivoizana ao amin'ny lisitr'ireo Amazon, dia mety efa mametraka ny tenanao ho amin'ny fahombiazana ianao. Ary avelao hiatrika izany avy hatrany - ny tanjonao fara-tampony dia ny handrindra ny teny fototra (teny na teny lava be farany) ho toy ny topa organika atolotra ho an'ny fivarotana. Raha ny marina dia tsy misy fomba hafa mitondra ny fifamoivoizana ao amin'ny lisitr'ireo Amazona, raha tsy mahomby ianao mamakivaky fomba fanao mahazatra amin'ny fikarohana fototra. Ataovy tsotra fotsiny, tokony hametraka ny lisitry ny vokatrao ianao ary hanatsara azy io amin'ny teny mahazatra tena ampiasain'ireo mpividy tena mba hahafahanao mifanaraka amin'ny azy ireo ary koa ny fangatahana avo indrindra.
Ary maro ireo fitaovana hanampy anao amin'izany. Saingy hitako ihany ny vahaolana vitsivitsy. Eto ambany eto aho dia hizara ny zavatra niainako teo aloha mba hahafantaranao tsara ny fomba fitaterana ny fifamoivoizanao amin'ny lisitry Amazon anao - miaraka amin'ity torolàlana fohy sy tsotra ity. Ankoatr'izay, tsy voatery handoa onitra iray ianao, fa noho izaho natokana ho an'ireo fitaovana tsara rindrambaiko taloha izay omen'ny grenady an'arivony maneran-tany. Tena matotra. Midika izany fa androany dia maneho anao aho fa antitra Keyword Tool, izay efa nahavita zavatra manodidina ny dimy taona lasa izay tahaka ny ahafantarantsika azy anio.
Mitadiava Fomba Fikarohana Miaraka Amin'ny Teny Miantehitra Main
Toy izao ny fomba famindrana ny fifamoivoizanao amin'ny lisitry ny vokatra Amazon - Manoro hevitra aho amin'ny fanaovana kickstart amin'ny fampiasana fitaovana Keyword Planner Google. Ny dingana voalohany amin'ny fomba hanatanterahana ilay asa dia tsy misy mpitaingina - ny zavatra rehetra ilainao dia miditra amin'ny teny fototra fototra ao amin'ny doka fisavana mba hampisehoana lisitry ny teny ifandaharana misy ifandraisany. Aza adino anefa fa tokony hokarohina amin'ny hevitrao amin'ny teny fanalahidy ianao (fa tsy Adiresy Adiresy!).
Ity ny angon-drakitra manan-danja indrindra ho anao mba hanomezana fanazavana bebe kokoa azy:
Keyword Araka ny fahamendrehana Ny teny fanalahidy dia nalaina tao amin'ny Google Earth Key Planner Tool. Dia izay.
Volana fikarohana volana isam-bolana - Mazava ho azy fa ny tena anton'ilay Amazon dia tsy mitovy mety ho hita amin'ny mpanampy an-tserasera ao amin'ny Google. Na dia izany aza, ny nomerao nomerao dia mety ho ampy tsara ho anao hahatsapa ny fomba fitondrana ny fifamoivoizanao amin'ny lisitry Amazon raha manome loha laharana ny teny fanalahidy marina.
Soso-kevitra omena amin'ny fifaninanana - tsarao fa afaka misintona ity fizarana ity raha toa ka vaovao ianao. Saingy raha efa efa nandalo tranonkala iray ianao dia mety ho fantatrao fa ireo tsanganana natao ho an'ny famoronana AdWords ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny lisitry ny vokatrao amin'ny Amazon. Na izany aza, raha toa ianao ka tsy mahaliana anao eto, ity fizarana ity dia mety hahasoa anao manokana. Midika izany fa tsy maintsy misy angon-danja azo antoka, mazava ho azy, raha toa ianao ka vonona ny hitondra fiara manokana amin'ny volanao amin'ny pejy Source .